Kungani kuqhuma izintaba-mlilo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Las Ukuqhuma kwentaba-mlilo Bangomunye wemibukwane emikhulu kakhulu esinikezwa yimvelo. Okumangazayo, okwethusayo, futhi kwesinye isikhathi okuyingozi: banakho konke ukwesatshwa isintu ... noma kunalokho bafuna ukusondela ngangokunokwenzeka kubo ukucabanga ngobuhle babo. Ubuhle bomlilo, umlotha, futhi kwesinye isikhathi ngisho nombani.
Kodwa wake wazibuza kungani kuqhuma izintaba-mlilo?
Incazelo ilula impela: Ngaphakathi kwentaba-mlilo kukhona idwala eliwuketshezi elinamazinga okushisa aphakeme kakhulu, aphakathi kuka-700 no-1500 degrees Celsius-, afuna indlela yokuphuma. Kepha kunjalo, iqhuma kanjani futhi kungani? Lokho ukuthi, kungani intaba-mlilo "ivuka"?
Kuyavela lokho amagesi nedwala elincibilikile kunqwabelana ngaphakathi kuwo, kubangele ukuthi i- magma, engamakhilomitha amaningana ukusuka phezulu, iphakame ngenxa yengcindezi. Njengoba lenza kanjalo, liyancibilikisa amadwala asendleleni yalo, lenze umfutho owengeziwe. Ekugcineni, lapho "ingasakwazi ukuthatha okunye", kulapho iqhuma ngendlela enodlame kakhulu ngokuya ngezimpawu zentaba-mlilo, ixosha umlotha nothuli emkhathini, ngenkathi ishiya umzila wayo futhi nasemadolobheni noma emadolobheni azungezile. .
Njengoba sishilo, kwesinye isikhathi kuvela umbani esibhakabhakeni ngesikhathi kuqhuma intaba-mlilo. Njengamanje ayikho incazelo eyodwa engaba khona yalesi simo, kodwa ezimbili, okuyilezi:
Umoya oshisayo ophuma kule ntaba-mlilo, lapho uhlangabezana nomoya obandayo, uyawakhiqiza.
Noma kungenxa yokuthi yonke into ephuma kule ntaba-mlilo inamandla kagesi akwazi ukukhiqiza umbani.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo kuyizimangaliso eziyiqiniso: yisibonelo esisodwa samandla amandla endalo anawo, nokuthi singabona bukhoma futhi siqonde kusuka ezindaweni eziningi, njengaseSicily (Intaba-mlilo i-Etna), noma eJapane (Intaba i-Aso).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Thola ukuthi kungani kuqhuma izintaba-mlilo